पूर्व मिस नेपाल शृखला खतिवडा अमेरिका जाने उड्नु अघि सिसनको परिवारलाई भेटीन् – Gazabkonews
पूर्व मिस नेपाल शृखला खतिवडा अमेरिका उड्नु अघि सिसनको परिवारसँग गरिन् गोप्य भेट ! , छुट्ने बेलामा आँखाभरी आँसु पार्दै सिसनले अँगालोमा कसे, शृखलाले सम्झाउँदै भनिन् म तिम्रै हुँ, जहाँ गएपछि तिम्री बेहुली बन्न म फर्केर आउँछु, फेरी भावुक बन्यो माहोल र सबै रोए, त्यो दिन के साँच्चिकै शृखलाले सिसनसँग इन्गेजमेन्ट गरेकी हुन् ? सामाजिक संजालमा तस्विर भाइरल बनेका छन्
काठमाडौं-पूर्व मिस नेपाल शृंखला खतिवडा अमेरिकाको हावर्ड विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर गर्न जाने भएकी छन्। आर्किटेक्चरमा स्नातक गरेकी खतिवडाले स्नातकोत्तर गर्न हावर्ड विश्वविद्यालयमा जान लागेकी हुन् । आर्किटेक्चरमा स्नातक गरेकी खतिवडाले सहरी विकासमा स्नातकोत्तर गर्न लागेकी हुन्। गत जनवरीमा आवेदन दिए उनले विश्वकै प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा अध्ययन् गर्न पाउनु जीवनको सबैभन्दा ठूलो सफलता रहेको बताएकी छन् ।
उनले सुरुमा आफूलाई हावर्डमा सक्छु भन्ने नलागेको भन्दै लकडाउनको फुर्सदमा भने पढ्न इच्छा लागेकाले जसरी पनि आट्छु भनेर लागेको बताइन्। उनले लकडाउन ताका फेरि थप अध्ययन् गर्ने रूची जागेको बताएकी छन् । आँट गरेपछि सिकने उनले बताइन् । दुई वर्षको कोर्स रहेको भन्दै उनले पढाइपछि भने नेपाल नै फर्किने बताइन्। शृंखलाले केही समयअघि मात्र नेपालमै ‘गाथा’नामक कम्पनी सञ्चालनमा ल्याएकी थिइन्।